Olee otú ọsọ Up Your iPhone 4 / 4S / 5 / 5S / 6 / 6Plus o
Onye ọ bụla hụrụ ekwentị na arụ ọrụ nke ọma na iPhone ọrụ na-emekarị na-agụnye ọsọ. A ngwa ngwa ekwentị bụ mfe iji na a ọṅụ aka na bụ ya mere ọtụtụ ndị mgbe niile na-agbalị adị n'elu ha ịrụ ọrụ ekwentị. Ná mgbalị iji nyere gị aka adị n'elu gị iPhone, anyị na-aga ele anya na ọtụtụ ụzọ na-eme otú ahụ maka ihe niile iPhone ụdị. Ka-amalite na iPhone 4.
Part 1: Atụmatụ na adị gị iPhone 4 / 4S
Part 2: Atụmatụ na adị gị iPhone 5 / 5S
Nkebi nke 3: Atụmatụ na adị gị iPhone 6/6 Plus
Part 4: 1 Pịa adị n'elu gị iPhone 4 / 4S / 5 / 5S / 6/6 Plus
Part 5: Great ngwa ọdịnala na adị gị iPhone 4 / 4S / 5 / 5S / 6/6 Plus
Ndị na-esonụ Atụmatụ kwesịrị inyere gị aka adị n'elu gị iPhone 4 / 4S;
Ọ bụrụ na i nwere adịghị ugbua, kwalite ka iOS 9.0. The iOS 9.0 na-eweta a otutu ọzọ atụmatụ na ga-melite arụmọrụ nke gị iPhone.
Gbanyụọ ndabere ngwa ume kpam kpam ebe ọ na-eme na-enweghị isi Filiks na-agba ọsọ na ike igbochi gị iPhone ịrụ ọrụ.
Belata nghọta na ngagharị mmetụta
Ọ bụrụ na gị keyboard na-lagging, ị nwere ike ọ bịa ọsọ ọsọ site resetting keyboard Akwụkwọ ọkọwa okwu na ntọala ngwa.
Hichapụ niile ngwa ọdịnala na mgbasa ozi faịlụ ndị na-adịghị eji. Mgbe ụfọdụ, ndị enweghị ohere pụrụ ịbụ isi-akpata n'ihi na arụmọrụ mbipụta.
Ndị a Atụmatụ ga-enyere gị adị n'elu iPhone 5 / 5S.
Belata ngagharị iji nweta ụfọdụ ọsọ nkwalite ya. I nwere ike ime nke a na ntọala ngwa.
Ị nwekwara mkpa atụgharị nke nghọta na ị ga-achọpụta ole na ole mgbanwe gị iPhone ịrụ ọrụ.
Gbaa mbọ hụ na ị na-ezuru nchekwa n'ihi a enweghị nchekwa pụrụ ime ka ụfọdụ ngwa okuku na-eme ka ogbenye arụmọrụ.
Tọgharia ha niile ntọala. Resetting gị iPhone 5 nwere ike idozi nsogbu ndị na-eme ka ogbenye arụmọrụ na gị iPhone.
Hichapụ ngwa ọdịnala na mgbasa ozi faịlụ na ị na-adịghị eji.
A bụ otú ka mma gị iPhone 6 ịrụ ọrụ.
Iwepụ-enweghị isi na ejibeghi ngwa na gị iPhone 6
Jiri ihe ngwa dị ka PhoneClean ma ọ bụ SafeEraser-ewepụ ihe niile junk faịlụ na iPhone 6
I nwekwara ike iji SafeEraser na PhoneClean wepụ zoro ezo faịlụ site na gị iPhone
Mechie niile ngwa mgbe eji zere ngwa ọdịnala na-agba ọsọ ndabere na nwere ike jiri ọsọ nke gị iPhone.
Kagbuo nghọta mmetụta
E nwere ụzọ na i nwere ike mma gị iPhone si ọsọ na 1-click. Otu ngwa na-bụ zuru okè n'ihi na nke a bụ Wondershare SafeEraser. SafeEraser-enye gị ohere adị n'elu ngwaọrụ gị site na-eme ọ dị nnọọ mfe ọcha gị usoro. Ọtụtụ mgbe ugboro emezighituri nọgidere na-enwe iPhone bụ isi na-akpata ihe na-erughị stellar arụmọrụ. Ị nwere ike iji SafeEraser ikpochapụ niile nke gị onwe data na Free ụfọdụ ohere nchekwa. Dị ka anyị hụrụ na Atụmatụ n'elu, ị nwere ike mfe mma gị iPhone si arụmọrụ site na gwakwara elu ụfọdụ ohere.
Ka anyị hụ otú ị pụrụ ọsọ n'elu gị iPhone iji Wondershare SafeEraser. Buru n'uche na otu n'ime ụzọ ka mma ịrụ ọrụ bụ ihichapu ụfọdụ achọghị faịlụ. Ya mere, anyị na-aga na-eji SafeEraser ihichapụ kpam kpam gị ehichapụ faịlụ.
Nzọụkwụ 1: Anya isi na ị ebudatara na arụnyere SafeEraser na kọmputa gị, na-agba ọsọ ngwa na mgbe ahụ jikọọ gị iPhone na iji eriri cables. Ngwa ga-chọpụta ma na-aghọta ekwentị gị dị ka egosipụta n'okpuru.
Nzọụkwụ 2: On n'akụkụ aka ekpe họrọ ihichapu ehichapụ faịlụ. Ngwa ga-amalite iji nyochaa na ike iṅomi niile data na gị iPhone.
Ngwa ga-amalite iji nyochaa na ike iṅomi niile data na gị iPhone.
Nzọụkwụ 3: Ozugbo niile nke faịlụ e scanned, ha ga-egosipụta na nke pụrụ ịkpata window. Pịa "ihichapu Ugbu a,"
Ị nwere ike họrọ faịlụ na ị chọrọ ka ihichapụ site n'inyocha igbe n'ihu nke faịlụ.
Nzọụkwụ 4: Ị ga-ahụ-kpaliri gosi ya na unu nhichapụ site na iji kọmputa ede okwu "Hichapụ" ke nyere igbe.
Nzọụkwụ 5: a ọhụrụ window ga-egosipụta na usoro e ọma dechara. Gị mkpa iji hụ na e jikọọ ekwentị gị na kọmputa dum usoro.
Ọ dị mkpa iburu n'obi na faịlụ na ị nwere na iTunes ga-ehichapu na unrecoverable.
N'ihi na ndị na-eji iOS 8/9 ọ bụghị ihe ọhụrụ na-enweta arụmọrụ mbipụta. HideMe7 e kwuru dị ka ndị a aka nke ukwuu na na. Ọ na-ekwe ka ị na-zoo UI ọcha na iOS 8/9 na-enweghị mkpa nwere ton nke ndị ọzọ na Tweaks aka. A ngwa ga-eme ka i nwee Kwado na gbanyụọ akụkụ ụfọdụ nke ekwentị gị dị ka akara center, igwefoto, akara ngosi jitter, akwụkwọ akụkọ, peeji ntụpọ na ndị ọzọ.
Nke a tweak ga-adị n'elu gị animations. Ọ na-enye gị ohere ịgbanwe ọsọ nke gị iOS 8/9 animations gị chọọ. The animations nke iOS bụ mgbe ngwa ngwa ma nke a tweak ga ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla ọzọ na-enye na nro na animations na-agba ngwa ngwa karịa ha bụ n'ezie. Nke a ga-enye gị zuru okè na gburugburu ebe obibi na-arụ ọrụ dị ka ngwa ngwa dị ka ị chọrọ na-enweghị ihe mgbochi nke onye na-adịghị animations.
> Resource> iPhone> Olee otú iji ọsọ Up Your iPhone 4 / 4S / 5 / 5S / 6 / 6Plus